Global Voices teny Malagasy » Brezila : Esorina Ny Filoha, Ny “Fianakavian’ny Mpanjaka” Te-Hilalao Ny “Lalaon’ny Seza Fiandrianana” Ho Tena Izy · Global Voices teny Malagasy » Print
Brezila : Esorina Ny Filoha, Ny “Fianakavian'ny Mpanjaka” Te-Hilalao Ny “Lalaon'ny Seza Fiandrianana” Ho Tena Izy
Voadika ny 17 Jona 2016 17:35 GMT 1	 · Mpanoratra Fernanda Canofre Nandika Lauren RAJAOBELINA
Ny fandikàn'ilay Frantsay mpanao hosodoko François-René Moreau ny fahaleovantenan'i Brezila tamin'ny tapaky ny 1800. Eo afovoany i Dom Pedro I, Mpanjakan'i Brezila voalohany, zanaky ny mpanjaka Paortigey John VI. Sehatra ho an'ny Vahoaka.
127 taona izay, fitondrana mpanjaka no rafi-pitondrana tany Brezila, fa nanome fotoana ireo mpandova ao amin'ny fianakavianà mpanjaka farany tao amin'ny firenena hampiantso ireo mpandàla ny fiverenana amin'ny rafitra fitondran'ny mpanjaka ny mety ho fanesorana ny Filoha Dilma Rousseff , ary mety handray anjara goavana amin'izany ezaka izany ny haino aman-jery sosialy.
Tamin'ny herinandro lasa, nizara lahatsary  izay vetivety foana dia nalaza, tao pejiny Facebook ôfisialy ny Printsy Don Rafael (izay laharana faha-efatra amin'ny andalam-pifandimbiasana, raha toa ka mbola fitondrana mpanjaka no rafi-pitondrana any Brezila). Ao amin'ilay lahatsary, arahabain'i Rafael ireo “mpandàla ny fitondrana mpanjaka” ao amin'ny firenena ary amafisiny fa ” resaka fotoana sisa dia hiverina ny rafitra fitondrana mpanjaka”. Nanampy avo telo heny ny isan'ireo mpanaraka ny Facebook-n-dRafael ilay lahatsary, niaraka tamin'ny hita maherin'ny 400.000, nanomboka tamin'ny 6.000 ka hatramin'ny 20.000 eo ho eo , tao anatin'ny andro vitsy.
Zanatany Paortigey i Brezila teo anelanelan'ny 1500 sy 1815, nasandratra ho fanjakana izy taorian'ny namindràna ny fahefana paortigey ho amin'ilay zanataniny lehibe indrindra nandritra ny fananihambohitra Napoleonika tany Paortiogaly. Ny taona 1822, rehefa niverina tany Paortiogaly ny fianakavian'ny mpanjaka, dia nahaleo tena ihany i Brazila no niafaràny, saingy hafahafa ihany fa i Dom Pedro, zanakalahin'ny mpanjaka Paortiogey izy tenany, izay navela mba hitondra ny fanjakana ho toy ny printsy mpisolo toerana no olomangam-pirenena.
Nisitraka ny fanohanan'ny fitondran'andriana sy fanànana andevo any ambanivohitry ny firenena, izay voagejan'ny fanjakana Paortiogaly sy rahonan'ny hetsiky ny repoblikana revolisionera manerana an'i Amerika Espaniola, i Dom Pedro. Nanaiky ny lalàm-panorenan'ny fitondrana mpanjaka mba hiarovana ny tombontsoany manokana, amin'ny fitaingenana ny onjan'ny fitiavan-tanindrazana natomboky ny revolisiona Frantsay ny fitondran'andriana. Fa tamin'ny 1889, taorian'ny niatrehan'ny firenena ny firoborobon'ny sarangan'ny mpandraharaha teny an-drenivohitra sy ny fifanolanana teo amin'ny tafika sy ny fitondran'andriana vao lasa Repoblika sy nametraka ny fitondran'i Dom Pedro II i Brezila.
Setrin'ilay lahatsary nalefan'i Don Rafael dia mpisera maro tao amin'ny Facebook no naneso ilay heverina ho printsy, namorona vazivazy maro mifototra amin'ilay andian-tantara ao amin'ny fahitalavitra “Lalaon'ny seza fiandrianana” , toy ireo soso-kevitra hoe mety hanampy azy haka ny fanjakana Breziliana ireo dragona na ireo miaramilan'i Dothraki. Fa misy mpisera maro hafa amin'ny aterineto toa mankasitraka ny fiverenana amin'ny fitondran'ny mpanjaka. Heverin'ireo Breziliana ireo mantsy fa ny rafitra fitondrana mpanjaka any Soeda, Danemarka ary Angletera no antony mahatonga ireo firenena ireo hisitraka ny fahombiazana sy ny fitoviana ara-tsosialy. Fa ny tena mahagaga, dia toa tanora ny ankamaroan'ireo vaovao mpanohana ny fitondran'ny mpanjaka.
Tamin'ny volana May, naka ny hevitry ny olona sy nangataka ny mpamaky hifidy izay endrika fitondrana tsara indrindra mety ho an'i Brezila tao amin'ny kaonty Twitter-ny ilay mpanao gazety sady mpanentana fandaharana adihevitra, Mariana Godoy. Na dia tsy tena ara-tsiansa aza ilay fanadihadiana, dia nahavariana fa nisafidy ny fitondran'ny mpanjaka ny 41 isanjaton'ireo namaly.
Nivonona ny handray an'i Dom Bertrand de Orleans e Bragança niaraka tamin'ny rahalahiny Dom Luis tao amin'ny fandaharany i Mariana Godoy– izy roa ireo dia samy taranak'i Dom Pedro II, laharana faharoa sy ny voalohany amin'ny andalam–pifandimbiasan'izay tokony hiakatra eo amin'ny seza fiandrianana tsy mbola hita ho antenaina — izay toa mitrandraka ny fomba hahazoana tombontsoa amin'ny hetsik'ireo mpitahiry ny fombandrazana ao amin'ny firenena mba hampiharihariana ilay raharahany. Narovan'i D.Bertrand, tao amin'ilay adihevitra,  ilay fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tamin'ny 1964, izay nametraka an'i Brezila tao anatin'ny fitondrana jadona nandritra ny 21 taona, ny zo hanana fanànana manokana ambonin'ny zavatra rehetra sady, ambany fanekena ny “lalàn'Andriamanitra”, nanameloka ny fiarahan'ny samy lahy sy ny samy vavy ary ireo “tombontsoa” rehetra omena ny LGBT.
Amperoran'i Brezila farany, Dom Pedro II, voaongana tamin'ny 1889. Sehatra ho an'ny daholobe.
(Manandrana) ny hamaly bontana ny rafitra fitondran'ny mpanjaka
Raha toa ka hafahafa tamin'ny maro tany Brezila ny fisainana hoe fiverenana amin'ny fitondran'ny mpanjaka, dia mihahita tsikelikely amin'ny hetsika an-dàlambe  ho fanoherana ny Antokon'ny Mpiasa nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2014 ny sainam-panjakana fahiny. Dom Bertrand ( izay mpandova seza fiandrianana Breziliana laharana voalohany amin'ny andalana fifandimbiasana raha araky ny filazana mampisalasala nataon'ny sampana Vassourasn-n'ny fianakaviana) dia nilaza tamim-pireharehana fa nivondrona tsy nasiam-panentanana ireo mpomba azy ireo. “Leo ny repoblika ny olona,” hoy ny izy manizingizina. 
Tamin'ny taona lasa, natetika nifanosona anatin'ireny “olon-tsotra” ireny ireo printsy avy amin'ny fianakavianà mpanjaka Breziliana ireo rehefa ao anatin'ny hetsika fanoherana an'i Dilma Roussef, naka sary niaraka tamin'ny sainam-panjakana taloha. Tsy mitovy amin'ny fitondrantena taloha izany fihetsika izany. Nandritra ny hetsi-bahoaka ho fanoherana ny fiakaran'ny saran-dàlana sy ny kolikoly izay nahavory Breziliana an-tapitrisa teny an-dàlambe tamin'ny Jona 2013 dia ny fijanonana tany an-trano no baiko ofisialy nomen'ny “fianakavianà mpanjaka” ho an'ireo mpanohana azy. Araka ny nolazain'ny BBC Brasil, dia hitan'ireo mpandàla ny fitondran'ny mpanjaka fa nilaina aloha ny “fijanonana” tamin'ny fandraisana anjara amin'ny fivoriam-bahoaka, tamin'izany fotoana izany.
Talohan'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2014, nanao filazana niresaka ny ” zo natoraly”, nitanisa an-dry Cicero, Aristote, ary ny Baiboly sy nandrisika ireo mpandàla fitondran'ny mpanjaka tsy hifidy ireo” mpifaninana izay manohitra ny fampianarana [momba ny zo natoraly]” na ho an”ireo antoko izay maniratsira ny Lalàn'Andriamanitra” ny taratasy nosoratan'i D Luis, navoaka tao amin'ny haban-tranonkala monarchy.com .
Nazavain'i Bertrand tao amin'ny resadresaka nifanaovany tamin'ny gazety Folha de São Paulo , ny antony nanapahan'ny fianakaviany hevitra hanaraka ny hetsika ara-politika amin'izao fotoana izao :
Malahelo ny fitondrana iray izay manao ny firenena ho tena firenena i Brezila: fianakaviam-be iray misy tanjona iarahana manatratra.
Rehefa mikiakiaka hoe :’ tiako hiverina ilay Brezila-ko” ny Breziliana, dia mikiakiaka hoe “tiako i Brezilan'i Kristy Mpanavotra sy Maria Virijiny avy any Aparecida [sary ao an-toerana]”.
Rehefa voaongan'ny repoblikana tamin'ny 1889 i D.Pedro II, dadaben'ny dadaben'ny dadaben'ireo printsy anankiroa izay miaro ankehitriny ny fiverenan'ny rafitra fitondran'ny mpanjaka any Brezila ireo, dia tsy nanohitra izy. Naleon'ny fianakavian'ny mpanjaka nangorona entana sy nandeha nipetraka tany Eoropa.
Tamin'ny 1993, nanararaotina ny herisetra vokatry ny fizotry ny fanonganana filoha iray hafa, dia nasiana fitsapankevi-bahoaka  nanontaniana ny Breziliana ny momba izay rafitra fitondrana tiany. 10,2 isanjaton'ny vahoaka ihany no nanohana ireo mpandàla fitondran'ny mpanjaka izay nanana fotoana  hiarovana ny heviny tamin'ny fahitalavitra . Mbola tsy miova io toe-javatra io hatramin'izao. 33 isanjaton'ny vola tokony ho tratrarina fotsiny amin'ny tanjona 5.000 BRL(1.470 dolara) no azo tamin'ny fanentanana fanangonam-bola tamin'ny olona  mba hamatsiana ny ” fampahafantarana ny momba ny rafitra fitondran'ny mpanjaka amin'ny aterineto”.
Mety hanomboka ihany ny fandalàna ny fitondran'ny mpanjaka any Brezila, na izany aza. Tamin'ny volana May teo, nandray sosokevitra  mba hamerenana ny fitondram-panjakana parlemantera ho vahaolana hamaranana ny ” rafi-pitondrana misy filoha lò sy feno kolikoly ” ananan'i Brezila ny Loholon'ny firenena. Navoakan'ny Loholona tamin'ny tranonkalany io sosokevitra io, manana hatramin'ny volana Septambra 2017 ny olona mba hanekena ilay lahatsoratra. Hatreto, mpanohana goavana 18 no azony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/17/84277/
 mpanaraka : https://www.facebook.com/PrincipeRafaelDeOrleansBraganca/likes
 Zanatany Paortigey : https://ninja.oximity.com/location/Colonial-Brazil-1
 mihahita tsikelikely amin'ny hetsika an-dàlambe : http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/manifestantes-pediram-volta-da-monarquia-em-protestos
 hetsi-bahoaka ho fanoherana : https://globalvoices.org/specialcoverage/2013-special-coverage/brazils-vinegar-revolt/
 BBC Brasil, : http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150816_salasocial_monarquia_protestos_rs
 Folha de São Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1764271-familia-imperial-quer-usar-clima-de-divisao-para-restaurar-monarquia.shtml
 nanana fotoana: https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjex6Pngp3NAhWIWpAKHZN4AKcQtwIIKzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2ZN5AOQ9FCs&usg=AFQjCNE52CUK2A4bgDjkA9UTxJkiQvcb3w&sig2=p9JpojM4gJM7Lmz5pGZmUg
 fanentanana fanangonam-bola tamin'ny olona: http://www.kickante.com.br/campanhas/o-brasil-e-real